Low fps amin'ny avo PC farany
fanontaniana Low fps amin'ny avo PC farany
1 taona 7 volana lasa izay - 1 taona 7 volana lasa izay #621 by JanneAir15
Salama! Vao haingana aho vao nanao solosaina vaovao ka nametraka FSX. Tsy addons aho amin'izao fotoana izao (ao amin'ny solosaina antitra nisy maro freeware addons) saingy manontany tena aho hoe nahoana aho no tena ambany fps na dia tena tsara amin'ny solosaina (manodidina 20fps). Afaka manampy ahy ve ianao, azafady?
Mazava ho azy, ny specs ny solosaina
CPU: AMD Ryzen 1700X (tsy overclocked)
RAM: G fahaiza-manao Ripjaws V Series 16GB DDR4 3200MHz
Mino aho fa misy ny zava-dehibe indrindra ny mahafantatra fa hanontany Ahy ianao raha tsy mba nafeniko zavatra.
Last edit: 1 taona 7 volana lasa izay JanneAir15.
1 taona 7 volana lasa izay #623 by Gh0stRider203
Misy zavatra vitsivitsy azonao atao. Ny #1 toerana no ampiasaina mba hampiasa, Mampalahelo fa tsy misy intsony manodidina
zavatra voalohany atao aho, ny marina, no hanoloana ny UIAutomationCore.dll rakitra. Tsy mahatsiaro na dia izay nahazo ny fanoloana rakitra avy.
Mety hanampy izany: steamcommunity.com/app/314160/discussions/0/530646080866079080/
1 taona 7 volana lasa izay #624 by JanneAir15
Efa izany UIAutomationCore. dll nefa afaka miezaka ny tendron'ny amin'ny Steam amin'ny forum. Misaotra. Teny an-dalana aho, voafafa ny fsx.cfg satria efa tweaked izany, fa ankehitriny dia nametraka fotsiny ny sasany ary izany tweaks efa somary tsara kokoa amin'izao fotoana izao.
1 taona 7 volana lasa izay #625 by JanneAir15
Raikitra izany! Vao nahita mandanjalanja tsara eo amin'ny sliders aho ary na dia efa nanao ny sasany teo sliders mbola mijery tsara kokoa noho ny tamin'ny toe-javatra aho, nananany fahiny Izy. Mampihomehy izany
1 taona 7 volana lasa izay #629 by Gh0stRider203
Tia foana tsara fiafara!